မိတ် ဆက် ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မိတ် ဆက် ခြင်း
မိတ် ဆက် ခြင်း
Posted by shwe pont on Jan 28, 2012 in Copy/Paste | 27 comments
မန်းဂေဇက်မင်ဘာဝင်တယောက်အဖြစ် အခုမှစာရင်းသွင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေရာကိုရောက်ပြီး စာတွေဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာ ၂ နှစ်ခန့် ရှိတော့မည်ထင်ပါသည်။ မန်းဂေဇက် ရဲ့ စာတွေကို နေ့ စဉ် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့လို့စာရေးသူများကို စိတ်ထဲကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေခဲ့တာလည်းအတော်ကြာပါပြီ။ ဓါတ်ပုံတွေလည်းကြည့်၊ စာတွေလည်းဖတ်၊ ကြိုက်တဲ့စာမူတွေ ဗဟုသုတ ရစရာစာတွေကို သိမ်း၊ တွေ့ ဆုံပွဲတွေကိုလည်း အားကျ နဲ့မန်းဂေဇက်မင်ဘာတွေရဲ့ စည်းလုံးမှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုမိခဲ့ပေမဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် မင်ဘာတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ တော့ ဒီနေ့ မှ အားထုတ် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အမှတ်တရ ဇန်န၀ါရီ 28 ရက်ပါပဲ။ စာရေးကောင်းလှသူတွေကို အားကျလှသလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာပါ။ ခုထိ မန်းဂေဇက်မှာ စာတတန် ပေတဖွဲ့ရေးပြီး တင်ရဲလောက်အောင် မရဲသေးပေမဲ့။ တကယ်ရေးချင်လာတဲ့တစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ ပို့ စ်လည်း မန်းဂေဇက်ပေါ်ရောက်လာကောင်း ရောက်လာဖြစ်မှာပါ။ ပထမစပြီးရေးတာမို့စည်းကမ်းနဲ့ မညီညွတ်တာများရှိရင်လည်း ပြုပြင်ပေးကြပါ။ ခုတော့ မန်းဂေဇက်ရဲ့သူကြီးနဲ့ တကွ ၊ စီနီယာမင်ဘာများကို မိတ်ဆက်ရုံပါပဲ။ ကျွန်မ ရွှေပုံ့ပါ။
ရွှေပုံ့ ရေ ငွေအမှုန့် တွေ ပက်ဖြန်းပြီး တော့မှ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ လို့ ပြောခွင့်ပြုပါခင်ဗျား ။
ရွာထဲရောက်ရင် ဒီအပေါ်ဆုံးကလူကြီးကို ရှောင်ကွဲ့ 
အူးတို့ ကတော့ သူ့ လောက်မဆိုးဘူးကွဲ့ .အူးတို့ က အေးချေး..အေးချေး
ကြိုဆိုပါသည် မြန်မာပြည်က အဲလေ ဂေဇက်ရွာက
ပယင်းယောင်နဲ့ မင်းကောင်ကသာ အကောင်းဆုံး ရှဉ့် အဲ ဗျ …..
(ကိုယ်စားချင်တဲ့အကောင်တွေ ပြောမိပြန်ပြီ) …
မ၈င်္လာပါ ရွှေပုံ့ရေ .. နောက်ထပ်ရေးတင်မယ့် ပိုစ့်တွေကိုလည်း
ခေးရေးတင်သမျှ ကို စောင့်ဖတ် အားပေးနေမယ့် ….
အာကိုဂျီး တီယောက်လုံး ချိဘာဒယ်ကွယ်…..
အပေါ်က ကင်း-ပေ-ဖော် လူဇိုးဂျီး ၃ဖော် ကို သဒိထားပါကွယ်……
ရွာထဲခုမှရောက်ပေမယ့် ရွာပြင်ကနေ လျှောက်ပြန်သံပေးနေတာ ၂ နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုမှတော့ ပေ့ါသေးသေးတော့ ဖြစ်မယ်မထင်မိဘူး။
ဆိုတော့- ပြောလက်စနဲ့ ရွာ့အထာ ပေးရမယ်ဆိုရင်
အပေါ်က သွားမရှိလို့ စကားမပီတော့တဲ့ အဘကြီးနဲ့
ကင်း-ပေ-ဖော်ဆိုတဲ့ ခေါင်း၃လုံးရှိတဲ့ ရွာသူား စီနီယာကြီးတွေကို
ကိုယ့်အဖိုးတွေလို သဘောထားပြီး ခင်မင်နိုင်ရင်းနှီးနိုင်ပါတယ်ကွယ်
ဟုတ်ကဲ့ ခုလိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပေးကြသော စီနီယာများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
( အဆိုတော်လေသံနှင့်ဖတ်ပါ )
ရဲရဲမြင်လိမ့်မည် …… နောက်တ၀က် အမှန်တ၀က်နော် .. :grin: :grin:
စီနီယာ ဂျုနီယာ ရှိပါဘူးတဲ့ .. လက်သံပြောင်ဖို့ဘဲလိုတာပါတဲ့…
မင်္ဂလာစည်တော်နဲ့ ပြည်ဝင် သံသာပေးလိုက်မယ်…
အတင်းစကားနဲ့ ဟို မသမာကောင်တို့ အဖွဲ့ ရှောင်……
ရွာထဲ တသောသော ရယ်မောပြီး
နောက်မှ အလုပ်ပျက်(သို့) အိပ်ရေးပျက်မှန်း သိသွားတဲ့အချိန်လောက်ကြရင်
ဂေဇက်ကို ရင်းနှီးသွားပြီလို့ သဘောပေါက်လိုက်ပါတော့။
ကောင်းပါ့ကွယ်…။ ကိုယ်တွေ တုန်းက အဲဒိလို မိတ်ဆက်ဖို့ စိတ်ကူးပေါ်မလာဖူးဘူး…။ ning.com က ပိုက်ဆံတောင်းလို့ စာရေးစရာရှာနေတုန်း ဒီဂဇက်တက်ထဲကိုရောက်လာတာ …။ ဖတ်လည်းရေးမှာပဲ မဖတ်လည်း ရေးမှာပဲဆိုပြီး ရေးလာတာ 14 လလောက်ရှိပြီ…။ အဲဒိတော့ ရွှေပုံ့အနေနဲ့ ရေးချင်တာ ရေးစရာရှိတာ ရဲရဲတင်းတင်းသာရေးဖို့ အားပေးပါတယ်…။
ကျနော်လည်း အတူတူပဲဗျ မင်ဘာဝင်ထားပေမယ့်
ဒီနေ့မှ စပြီး ပို့စ်ရေးဖြစ်တာ
ဖွာဖက်တော် ရွာသူရွာသားတွေမို့ အားပေးနေခင်မင်သွားပါမယ်ဗျာ
(ဘယ်သူ ခေါ်ခေါ် မခေါ်ခေါ် အတင်းဆွေမျိုးစပ်ပစ်မှာပဲနော်..)
ရေးချင်ဇောနဲ့ ဖွားဖက်တော် ကို ဖွာဖက်တော်ဖြစ်သွားဘီ အဟီး
ဘဝတူပါဘဲ။ ရွာပြင်မှာ လှည့်ပါတ်နေပြီးကြည့်နေတာ အချိန်အတော်ကြာမှ ရွာထဲကို ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
“အလုပ်ပျက်(သို့) အိပ်ရေးပျက်မှန်း သိသွားတဲ့အချိန်လောက်ကြရင် ဂေဇက်ကို ရင်းနှီးသွားပြီလို့ သဘောပေါက်လိုက်ပါတော့။”
ရာခိုင်နှုန်းပြည့် သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်းပါ၏။
ကျွန်မ လဲ ဒီလိုဘဲ မိတ်မဆက် ဘဲ ဒီအတိုင်းဝင်လာမိတာ။
ဒီလို မိတ်ဆက် ဝင်လာတာပို ကောင်းတယ်ထင်မိတယ်။
ရွာစားကျော် ကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ်နော်။
ရေးလာမဲ့ အကြောင်းလေးတွေကိုလဲ မျှော်နေပါတယ်။ :-)
ရွှေပုံ့ရေ ကျနော်တို့လဲ သုညက စလို့ လက်သွေးရင်း အများကြီးရေးဖြစ်သွားတာပါဗျာ။
လက်ကမ်းလို့ကြိုပါတယ် မည်သူမဆို စာရေးချင်သူမှန်သမျှကို………………………….
သူကြီးရဲ့ မန်းဂေဇက်တော့ ရတနာပုံကိန်းဆိုက်ပြီ။ ရွှေပုံကြီးမန်းဂေဇက်ထဲကိုဝင်လာပြီတဲ့။
ကျွန်တော်ရေးတဲ့သက်တမ်းက ၁နှစ် ရွှေပုံ့ရဲ့ဖတ်တဲ့သက်တမ်းက ၂နှစ်ဆိုတော့ ရွှေပုံ့ကိုတောင် စီနီယာပြန်ခေါ်ရတော့မယ်ထင်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ WARMLY WELCOME TO MG.
နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုကြတဲ့အတွက် တကယ်ပျော်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီမှာတော့ ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။ ခုထက်ထိ ခေါင်းစဉ်ရှာလို့ မရသေးဘူး။ ကုန်ကြမ်းရှာထွက်ရမယ်နဲ့ တူတယ် (ဟီး) တကယ့်စာရေးဆရာကြီးတွေကအဲလိုလုပ်ကြတယ်ဆိုဘဲ..
ရွာထဲက စိန်ပေါက်ပေါက်ဆိုတဲ့ တရုတ်ကြီးကိုရှောင်